Miss Grand International dia fifaninanana hatsaran-tarehy vehivavy izay natao nanomboka taminny 2013. Nawat Hisaragrisil, mpandraharaha Thailandey no nanorina azy io. Androany dia natolotry ny fikambanana Miss Grand International ny fifaninanana. ...
Ny Commonwealth no anarana ho anny firenena izay anisanny Fanjakana Britanika talohanny fahaleovan-tenanizy ireo. Ity vondrona ity ny firenena miara-miasa aminny raharaha lehibe maro, toy ny raharaham-barotra, ny fahasalamana sy ny ady aminny fah ...
Fikambananny Firenena Manondrana Solitany
Ny Fikambanan’ny Firenena manondrana solitany na ny OPEC dia fikambanana iraisam-pirenena manana ny foibe any Vienne, Aotrisy ary noforonina tao Bagdad, Irak tamin’ny 10-14 Septambra 1960. Io fikambanana io dia natao "handrindra ary hampiray ny p ...
Ny tenim-pirenena dia fiteny ho anny firenena iray manokana, fa miovaova ny fandraisana izany arakaraka ny firenena. Any aminny firenena sasany, ny fiteny iray dia mety manana ny satanny fitenim-pirenena araka ny lalàna na araka ny safidinny gove ...
Ny euro dia ny sandam-bola ofisialinny firenena mpikambana 19 ao aminny Vondrona Eoropeana, ary vola tokana sy iraisanireo firenena 19 ireo. Ny fikambananny firenena rehetra mampiasa ny vola euro dia atao hoe faritra euro. Ankoatranny firenena ao ...
5 Jiona: Ady an-trano any aminny Repoblikani Kongo. 11 Aprily: Fahataperanny ady an-trano any Angola, nanomboka taminny 1977 25 Mey: Coup dÉtat any Sierra Leone, mandritra ny ady an-trano, manery ny filoha lany Ahmad Tejan Kabbah handositra any i ...
I Nijera na Nizera dia firenena ao Afrika Andrefana izay manana ani Niamey ho renivohitra. Ny sisintanini Nijera dia nofaritanny mpanjanatany ka somary mahitsihitsy tsy manaraka soritra voajanahary. Mamaritra azy ao avaratra i Aljeria sy i Libia, ...
Ny kaodim-paositra dia vondron-tarehimarika na tarehin-tsoratra ampidirina ao aminny adiresy aminny paositra, sady ampiasainny paositra mba hanamora sy hanafainganana ny fandefasana ny taratasy na ny fonosana alefa. Miovaova ny endriky ny kaodim- ...
Ny fitiavan-tanindrazana dia midika hoe tsy fivadihanny olona aminny fireneny, na ny mpitondra ny firenena. Ny tia tanindrazana dia ny olona izay teo aminny lafinny fireneny, na ny mpitondra. Fitiavan-tanindrazana dia tsy mitovy aminny fanindrahi ...
Raha eo aminny sehatra toekarena ny Asa dia karazana andraikitra sy adidy sahaninny olona tsirairay, ka miteraka na mahazo vokatra tsara. Ny asa dia loharano hahazahoana sy hampidiram-bola aminny fiainanny olombelona eto ambonny tany. Mpiasa anas ...
Ny Bokini Habakoka dia boky ao aminny Tanakh sy ao aminny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly kristiana. Mampita hafatra ny mpaminany fa ny fahoriana dia tsy haharitra: manam-potoana aharetany manokana avy ny zavatra tsirairay, ary ny marina dia ...
I Sodàna Atsimo na ny Repoblikani Sodàna Atsimo da firenena ao Afrika Atsinanana izay manana renivohitra ani Djouba. Atao hoe Republic of South Sudan izy aminny teny anglisy fa République du Soudan du Sud izy aminny teny frantsay. Taorianny fitsa ...
Abdul Ghafur Breshna dia talen-koronantsary mizaka ny zom-pireneni Afganistana teraka ny 10 Aprily 1907 tao Kabul ary maty ny 4 Janoary 1974 tao Kabul
Ny fiteny persana na f iteny farsy dia tenim-pirenenan i Irana, ao amin ny fianakaviana indô-eorôpeana, ao amin ny sampana indô-iraniana, ao amin ny zana-tsampana iraniana. Mahery ny 60 tapitrisa ny isan ny mpiteny persana any Iràna ary any Afgan ...
Ny fiteny kazàka dia fiteny ao amin ny vondronny fiteny torkika. Ny fiteny kazàka no fiteny ôfisialin i Kazakstana miaraka amin ny fiteny rosiana. Ny toerana hafa itenenana ny fiteny kazàka dia ao amin ny faritra mizaka tenan i Xinjiang. Ny sorat ...
Irai ambangony fa parasitika zavamaniry aminny fianavakaviana Orobranchaceae Harveya. Dia hita inhany ao tany mafana Harveya. Misy eo anelanelany 40 karazana taminny ambangony Harveya. Mitombireo aminny Afrika Atsimo, Yemen, Madagasikara sy Comor ...
Ny fiteny xhosa dia fiteny any afrika atsimo. Ny isanny olona miteny io fiteny io any afrika dia misy eo aminny 8 tapitrisa eo ho eo. Ny fiteny Xhosa, noho ny isanny olona miteny azy, dia fiteny faha roa any Afrika Atsimo eo aorianny fiteny zulu. ...
Emil Nofal dia talen-koronantsary, mpamoaka horonantsary mizaka ny zom-pireneni Afrika Atsimo teraka ny 1 Janoary 1926 tao Afrika Atsimo ary maty ny 18 Jolay 1986
Phil Ramone dia injeniera mizaka ny zom-pireneni Etazonia, Afrika Atsimo teraka ny 5 Janoary 1934 tao Afrika Atsimo ary maty ny 30 Martsa 2013 tao New York
Fiangonana Ortodoksani Aleksandria sy Afrika manontolo
Ny Fiangonana Ortodoksani Aleksandria sy Afrika Manontolo na Fiangonana Ortodoksa Grikani Aleksandria sy Afrika Manontolo na Fiangonana Ortodoksa Tandrefan’i Aleksandria sy Afrika Manontolo dia sampana mahaleotenan’ny Fiangonana ortodoksa izay mi ...
Ny fiteny banto dia fianakaviam-piteny afrikana izay ahitana fiteny miisa 400 any ho any tenenin ny olona ao amin ny firenena manodidina ny roapolo ao amin ny antsasany atsimon i Afrika - izany hoe ao amin ny tapany afovoany sy atsimo ary atsinan ...
Ny f iteny kikôngô dia fiteny banto tenenin ireo Kôngô monina any Angôla, any amin ny Repoblika Demôkratikan i Kôngô, any amin ny Repoblikan i Kôngô ary any amin ny tapany atsimon i Gabôna. Ny fiteny kikôngô, raha ny tena marina, dia vondrom-pite ...
Ny fiteny tsiloba, izay antsoina koa hoe fiteny loba-kasay na fiteny kikasay dia fiteny banto ao Kôngô-Kinshasa izay manana satam-pitenim-pirenena ao aminny faritr i Kasaï. Tenenina ao amin ireo faritany Kasaï Atsinanana sy Kasaï Andrefana io fit ...
Ny Toà dia vahoaka monina ao aminny faritry ny Farihy Lehibe ao Afrika, isanireo atao hoe Pigmea, izay fantatra aminny hakely sy ny hafohinny tenany. Izy ireo no heverina fa mponina tranainy indrindra ao aminio faritra io. Ankehitriny dia ao Roan ...